Nohamarinina tamin’ny ran’i kristy isika
"Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa mainka aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny, rehefa nohamarinina tamin'ny rany isika." Rom. 5:8,9.
Nanao fampihavanana noho ny ota i Kristy ary Izy no nizaka ny zioga vokatr'izany : henatra sy latsa ary sazy (...) Na dia nitondra ny otantsika aza Izy dia mbola nitafy fahamarinana mandrakizay mba hahatonga ny mpino hadio tsy hisy pentina eo anoloan'ilay Ray.
Maro amin'ireo mitonona ho zanak'Andriamanitra anefa no miankin-doha amin'ny olona na amin'ny zavatra hafa fa tsy mba amin'ny ran'i Kristy irery ihany. Na dia efa asaina mametraka ny finoantsika amin'ny fahafenoany eo amin'i Kristy ilay hany Mpamonjy antsika aza isika dia mbola maro ireo manambara fa mametraka ny finoany amin'izay zavatra heveriny ho vitany. Izao no lazain'izy ireo: "Mbola betsaka ny ezaka tokony hataoko alohan'ny hanatonako an'i Kristy". Hoy kosa ny sasany: "Rehefa avy manao izay fara heriko aho dia ho avy Jesosy Tompo hanampy ahy". Mihevitra izy ireo fa manan-java-dehibe azony atao mba hamonjena ny fanahiny ka ho avy hanampy ny sisa tsy feno sy hanome ny singa farany hahafeno ny famonjena azy i Jesôsy. Tsy hahery mihitsy ireo fanahy osa ireo raha tsy mandray an'i Kristy ho Mpamonjy amin'ny fahafenoany. Tsy misy na inona na inona azony ampiana ho amin'ny famonjena azy.
Nasain'Andriamanitra namafy ran-janak'ondry teo amin'ny tolam-baravarana sy ny tataom-baravarana ny zanak'Isiraely mba tsy hahazo azy ireo ny fandringanana rehefa mamakivaky eo amin'izany tany izany ny anjely mpandringana. Raha toa ka tsy nanao izany fihetsika tsotra maneho finoana sy fankatoavana izany anefa izy ireo fa nanamafy hidin-trano sy nandray ny fepetra hanakanana ny anjely mpandringana tsy hiditra ao an-trano (...) dia ho very maina ny ezaka nataony.(...) Ny ra natete teo amin'ny tolam-baravarana sy ny tataom-baravarana dia efa ampy hahazoan'ny iray trano antoka ny arnin'ny famonjena. Tahaka izany koa ny amin'ny asa famonjena, ny ran'i Jesôsy Kristy no manadio antsika ho afaka amin'ny fahotana rehetra. YI, 6 Desambra 1894.
Azonao atao ny mandresy ny fahavalo ara-panahy rehetra ary azo sitranina ireo kileman-toetranao rehetra. - YI, 6 Aogositra 1884.